Ogaden News Agency (ONA) – Madaxwaynaha Faransiiska oo Booqasho Kadis Ah Sacuudiga Kutagay.
Madaxwaynaha Faransiiska oo Booqasho Kadis Ah Sacuudiga Kutagay.
Posted by ONA Admin	/ November 11, 2017
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in uu carrabka ku adkayn doono ahmiyadda degenaanshaha wadanka Lebanon isagoo billaabay booqasho aan horay loo sii qorshaynin oo uu Sacuudiga ku tagay.
Booqashadan ayaa imaanaysa ka dib markii uu Sabtidii lasoo dhaafay is casilay ra’iisulwasaarihii dalka Lebanon Sacad Al-Xariiri isaga oo ku sugnaa magaalada Riyadh, isla markaana sheegay in uu naftiisa u baqay. Arrintan ayaa durba dhalisay in laga shakiyo in Sacuudigu uu caddaadis ku saaray is casilaada Sacad Al-Xariir.
Madaxwayne Macron ayaa sidoo kale sheegay in uu hogaamiyeyaasha Sacuudiga kala hadli doono dhibaatada dalka Yemen ka taagan, ka dib markii xulafada uu Sacuudigu hogaaminayo ay xidheen dhammaan marinnadii galayay dalkaas dagaallada la daalaa dhacaya.
Cuna-qabatayntan ayaa dalka Yemen la saaray Isniintii ka dib markii gantaal laga soo riday lagu bartilmaameedsaday magaalada Riyadh. Waxaa la sheegay in gantaalka lagu qabtay meel u dhaw caasimadda Sacuudiga. Sacuudi Carabiya ayaa gantaalka ku eedaysay maleeshiyada ay Iiraan taageerto ee Xisbullah.
Qarammada Midoobayna (QM) waxay ka digtay “in Yemen ay wajahayso macaluushii ugu ba’nayd ee adduunka soo marta tobannaan sano” haddii aan go’doominta laga qaadin oon la soo celinin gargaarkii dalkaas la gaynayay.